YEYINTNGE(CANADA): Saturday, December 21
မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မလုပ်နိုင်ခြင်းမှာ များစွာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိသည်။
ဒီနေ့ အလုပ်များနေတဲ့အတွက် ခြေဆင်းရေးဖို့ အချိန်သိပ်မရလိုက်ဘူး။ လတ်တလော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်မြင်တဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ရေးထားတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မရေရာမသေချာတဲ့ အနာဂတ်ကို သန်းခြောက်ဆယ်ကို မပေးစေချင်လို့။ အဲတော့ ပိုကောင်းပြီး ပိုငြိမ်းချမ်း၊ ပိုယဉ်ကျေး၊ ပိုနားလည်မှုရှိ၊ ပိုယုံကြည်မှုရစေမယ့် အနဂတ်ကို ထုဆစ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်တာလည်းပါတယ်။ တည့်တည့်ပြောရရင် သန်းခြောက်ဆယ်ရဲ့ မျက်နှာတွေကိုထောက်ထားပြီး မဟောသဓာရဲ့ သားတရားစီရင်ခန်းကို သတိရကြဖို့ stakeholder လို့ပြောနေကြတဲ့ အများအကျိုးအတွက် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအတွက်၊ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ လုပ်နေကြတဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကို အထူးတလည် မေတ္တာရပ်ခံချင်တာပါဘဲ။ ဝေဖန်ဖို့၊ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲဖို့နဲ့ ဆင်ခြင်သတိပြုကြဖို့ ဒီနေ့ထုတ် The Voice Weekl အတွက် ရေးထားတဲ့ ခေါင်းကြီးကို မျှဝေပါတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု အားကြီးခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထက်လူကြီး အကြိုက်နှင့် အထက်လူကြီး ငြိုငြင်မှု နှစ်ခုကိုသာ အလေးထားခဲ့သော စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်ကြောင့် အရာရာတွင် တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု မရှိသလောက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ သဘောတူသည် ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ စုပေါင်း အဖြေရှာခြင်း၊ မတူညီသော သဘောထား အမြင်များကို နားထောင်၊ လက်ခံစဉ်းစားခြင်းတို့ မရှိဘဲ အထက်အမိန့် အရသာ စီမံခန့်ခွဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ သောကြောင့် ပြဿနာများစွာကို ပုံစံကျ စကေးကိုက် စဉ်းစားနည်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံစကားပြောခြင်း၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာခြင်း အလေ့အထ အားနည်းခဲ့သည်။ ယနေ့ ယခင်စနစ်ဟောင်းမှ စနစ်သစ်သို့ ကူးပြောင်းနေသည် ဆိုသော်လည်း ရာစုနှစ်ဝက်ခန့် အသားကျလာခဲ့သော စနစ်ဟောင်းမှ တွေးပုံ၊ မြင်ပုံ၊ ကြည့်ပုံ၊ စဉ်းစားပုံ၊ လက်တွေ့ဆောက်ရွက်ပုံ များမှ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးပေ။ ယင်းအချက်ကို ကုန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကျော် သုံးနှစ်ခန့် အတွင်း ကြုံတွေ့ခဲ့သော ပြဿနာအခက်အခဲ၊ ပဋိပက္ခများအား ဖြေရှင်းပုံ၊ ဖြေရှင်းနည်းက သက်သေ ပြသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် Democratization ခေါ် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်နေသည် ဆိုသော်လည်း Liberalization ခေါ် ဖြေလျှော့ခြင်း အဆင့်များသာ ရှိသေးသည်ဟု လေ့လာသုံးသပ်သူ များနှင့် ပညာရှင်များက ရှုမြင်ထား သည့်အတွက် အသွင်ကူးပြောင်းရေး လှေကားထစ် များကို စတက်ရန် ပြင်ဆင်နေသော အချိန်မျှသာ ရှိသေးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေပြုလွှတ်တော် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့် ယင်းမှတစ်ဆင့် မြင်သာထင်သာ ရှိသော ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှုများ မြင်တွေ့ရခြင်း သည်ပင်လျှင် ကြီးစွာသော အပြောင်းအလဲတစ်ခု အဖြစ် ရှုမြင်ကြပြီး အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အခြားနယ်ပယ် များတွင် ဖြေလျှော့ပေးခြင်း၊ အမျိုးသား ပြန်လည်စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး အလို့ငှာ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံသားများကို နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ကူညီဆောင်ရွက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အလို့ငှာ စားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ကိုလည်း အသိအမှတ် ပြုခဲ့ကြသည်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ခန့် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အသေအကျေ တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တပ်မတော် တို့အကြား ယနေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးနိုင်ကြသော်လည်း ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အတွက် မိမိတို့ ယုံကြည်ရာ လမ်းစဉ်ဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပါတီများ အချင်းချင်းနှင့် ဥပဒေပြု လွှတ်တော်၊ ပါတီ၊ အစိုးရ၊ တပ်မတော်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ အကြား အလွတ်သဘော ဖြစ်စေ၊ တရားဝင်ဖြစ်စေ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မလုပ်နိုင်ခြင်းမှာ များစွာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိသည်။ ထို့အပြင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို အဓိကထားသော အသေးအဖွဲ ကိစ္စရပ်အချို့ တစ်နည်းအားဖြင့် လူပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံရေးကို အလွန်အမင်း ဦးတည်စဉ်းစားသော ရှုထောင့်မျိုးမှ ကြည့်ကာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို ရှောင်လွဲနေ ခြင်းမှာ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး (ဝါ) အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို မလိုလားသည့် သဘော သက်ရောက်သွား နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက် တွင်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဖိတ်ခေါ်ရာတွင် အဖိတ်ခေါ် ခံရသူများ အကျဉ်းအကျပ်သို့ တွန်းပို့သကဲ့သို့ မဖြစ်စေရန်လည်း ဂရုစိုက် သင့်ပေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယနေ့ အချိန်အထိ ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်တတ်သည့် သဘာဝနှင့် မလွတ်ကင်းတတ် သေးသူများ၏ သဘာဝ၊ အခက်အခဲနှင့် အကျပ်အတည်းကို ကြိုတင် သိရှိထားရန် လိုပေသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးသည် ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သဘောထား တင်းမာသူများ၏ အယူအဆ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေ ပြသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားနိုင်ပေသည်။ များစွာ အရေးကြီးသည်မှာ သန်းခြောက်ဆယ်သော နိုင်ငံသား အားလုံး၏ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး သည်သာ အဓိကဆိုသော အချက်ကို မျက်ခြည် မပြတ်သင့်ကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/21/20130အကြံပြုခြင်း
မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း မန္တလေးမြို့အတွင်း လှည့်လည်အောင်ပွဲခံ
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့စတင်ပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက လျှပ်စစ်မီတာခတွေ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ထွက်လာတာကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအင်အားစုအဖွဲ့ MDCF က ကိုသိန်းအောင်မြင့်အပါအဝင် ၄ ဦးကို ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ ဒီနေ့ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်တစ်လကျခံဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဒဏ်ငွေ ၁ သောင်းပေးဆောင်ဖို့ အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ ၄ ဦးအတွက် ဒဏ်ငွေ ၄ သောင်းကို အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ပေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ကိုသိန်းအောင်မြင့်က ပြောပါတယ်။ “ဒဏ်ငွေတစ်သောင်း ပေးဆောင်ရမယ်၊ ဒဏ်ငွေတစ်သောင်း မပေးဆောင်နိုင်ပါက ထောင်တစ်လဆိုပြီးတော့ အဲဒီအမိန့်သံပဲ ကျနော်ကြားလိုက်တယ်၊ ကျနော်တို့ကို ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ထောင်ချတာပဲဖြစ်ဖြစ် အနိုင်ကျင့်တယ်လို့ပဲ ကျနော်ခံယူတယ်၊ ထောင်ထဲကိုလည်း ကျနော်တို့က ပြန်ပြီးတော့ သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ တိုင်းပြည်တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို အနှောင့်အယှက်ပေးထားတာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ အများပြည်သူအတွက်နဲ့ အစိုးရရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ကြားထဲက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာပဲ၊ ဒဏ်ငွေကိုလည်း ပေးဆောင်စရာအကြောင်း မရှိဘူး၊ ဒဏ်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ အကျိုးကို ကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က သူဝင်ဆောင်သွားပါတယ်” ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၆ရက်နေ့မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက လျှပ်စစ်မီတာခ ၂ ဆနီးပါး တိုးမြှင့်ကောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ထွက်လာတာကို ကန့်ကွက်ကြသူတွေဟာ ရန်ကုန်မြို့ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ သိမ်ကြီးဈေးရှေ့ကနေ ဆူးလေဘုရားအထိ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့် ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းက တရားလိုပြုလုပ်ကာ စီတန်းလှည့်လည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာနယ်လစ်ကို ပါးရိုက်တဲ့ မင်းသမီးကြတော့ ဒဏ်ငွေ တစ်ထောင်
Kyaw Naing Win..
7 Day Journal ဂျာနယ်လစ်ကို ပါးရိုက်စော်ကားတဲ့ မင်းသမီးကြတော့ ဒဏ်ငွေ တစ်ထောင်တဲ့. . . ကာယကံရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ အိမ်အတွင်း ၀င်ရောက်သတင်းယူတဲ့ သတင်းထောက်ကြတော့ နေအိမ်ကျော်နင်းမှု၊ အသရေဖျက်မှုနဲ့ ထောင်သုံးလတဲ့ . . . ကဲ . . မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေစိုးရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေးက မေးခွန်းထုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးထင်တင် . . အချင်းချင်းဆို ဆော်ဖို့လက်သံပြောင်တဲ့ ဂျာနယ်လစ်အချို့လဲ ဒီလိုကိစ္စတွေကြတော့ အသံတိတ်နေကြပါလား . . . ကဲ Eleven Media Group ကတော့ အများပြည်သူကတဆင့် အသိပေးတိုင်ကြားပြီ
Eleven Media Group ၏ နယ်သတင်းထောက် ထောင်ဒဏ်ချမှတ် ခံရခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီကို အိုးမည်းသုတ်ခံရခြင်းဟု The Voice Daily ခေါင်းကြီး၌ ဖော်ပြခဲ့ပြီး သမဂ္ဂသတင်း ဂျာနယ်ကလည်း ပြင်းထန်လွန်းသည့် အရေးယူမှု ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်
Eleven Media Group ၏ နယ်သတင်းထောက် မခိုင်ကို လွိုင်ကော်မြို့နယ် တရားရုံးက ပုဒ်မသုံးခုဖြင့် ထောင်ဒဏ်သုံးလ ချမှတ်ခံရခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီကို အိုးမဲသုတ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်ထုတ် The Voice Daily သတင်းစာ၏ ခေါင်းကြီးတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ထိုကဲ့သို့ အရေးယူ ခဲ့ခြင်းသည့် ပြင်းထန်သည့် အရေးယူမှု ဖြစ်ကြောင်း သမဂ္ဂသတင်း ဂျာနယ်ကလည်း ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နယ်သတင်းထောက် မခိုင်ကို အချိန်တစ်လကျော်အတွင်း အမှုစစ်ဆေး၍ ငွေဒဏ်သာ ချမှတ်လေ့ရှိသော ပုဒ်မများဖြစ်သည့် ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု (ပုဒ်မ ၄၅၁) အရ ထောင်ဒဏ်သုံးလ၊ အသရေဖျက်မှု (ပုဒ်မ ၅၀၀) အရ ထောင်ဒဏ်တစ်လ၊ ညစ်ညမ်းစွာပြောဆိုမှု (ပုဒ်မ ၂၉၄-ခ) အရ ထောင်ဒဏ်တစ်လတို့ကို တပေါင်းတည်း အနေဖြင့် ထောင်ဒဏ်သုံးလ ကျခံစေရန် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က လွိုင်ကော်မြို့၊ ဒုတိယမြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးမြမင်းဟန်က အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
''ဒီမိုကရေစီကို အိုးမဲသုတ်ခြင်းလော'' ဟု ခေါင်းစီးတပ်ပြီး ရေးသားခဲ့သော The Voice Daily သတင်းစာ၏ ခေါင်းကြီးတွင် ''သတင်းမီဒီယာ တစ်ခုတွင် သတင်းထောက်အဖြစ် ပုံမှန်သတင်းလိုက် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေသူတစ်ဦးကို ဤသို့သော ပုဒ်မများတပ်၍ စွဲချက်တင်ခြင်း၊ အမိန့်ချမှတ်ခြင်းမှာ မြန်မာ့သတင်း မီဒီယာလောက တစ်ခုလုံး၏ သတင်းသမား တာဝန်နှင့် ၀တ္တရားများ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ ပြည်သူလူထုတို့က သတင်းသိပိုင်ခွင့်တို့ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပိတ်ပင်ကန့်သတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု The Voice ကယူဆသည်'' ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ''. . . ယဉ်ကျေးစွာ ဖြေရှင်း၍ရသော အခြားနည်းလမ်းများစွာ ရှိသော်လည်း ဤသို့တိုက်ရိုက် တရားစွဲဆို အရေးယူခြင်းမှာ များစွာတစ်ဖက်သတ် ဆန်သည့်အပြင် သတင်းမီဒီယာများအပေါ် များစွာရန်လိုသည့်သဘော သက်ရောက်ကြောင်း The Voice က သုံးသပ်သည်'' ဟု ဆက်လက် ရေးသားခဲ့သည်။
''ထို့အပြင် ဥပဒေဘောင် အတွင်းမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သတင်းမီဒီယာ သမားတစ်ဦးကို နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအား အကာအကွယ်ပေးရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေများဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ တရားရေးမဏ္ဍိုင်က ရန်လိုစွာ တရားစွဲထောင်ချ အပြစ်ပေးသော လုပ်ရပ်မျိုး ယနေ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလတွင် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမှာ များစွာသံသယ ဖြစ်စရာ ကောင်းပေသည်'' ဟု The Voice ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ခေါင်းကြီးပိုင်း နောက်ဆုံးပိုဒ်တွင် ''ယခုကဲ့သို့ သတင်းသမား တစ်ဦးအပေါ် ပြင်းထန်စွာ အရေးယူ လိုက်ခြင်းသည် မြန်မာ့သတင်း မီဒီယာလောက တစ်ခုလုံး၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်တစ်ခု၏ အဆင့်အတန်းနှင့် ယဉ်ကျေးသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာတို့ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စိန်ခေါ်ခြိမ်းခြောက်သည့် လုပ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည့်အပြင် လက်ရှိအာဏာသုံးရပ် အပါအ၀င် အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တပ်မတော်တို့ အကောင်အထည် ဖော်နေသော ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အိုးမဲသုတ်လိုက်ခြင်းဟု The Voice က ရှုမြင်သည်'' ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော သမဂ္ဂသတင်းဂျာနယ်၏ ကြေညာချက်တွင် ''သတင်းရယူမှု ဖြစ်စဉ်အတွင်း သတင်းထောက်အား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းသည် အလွန်တစ်ရာ ပြင်းထန်လွန်းသည့် အရေးယူမှုဟု သုံးသပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အရေးယူမှုသည် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်များ ခွင့်ပြုလာသည်ဆိုသော ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ အခွင့်အရေးများအပေါ် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်မှ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာသည့်အတွက် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်၏ အခန်းကဏ္ဍမှ အခိုင်အမာ ရပ်တည်ပါကြောင်း သမဂ္ဂဂျာနယ်၏ သဘောထားကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ အပ်ပါသည်'' ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
နယ်သတင်းထောက်မခိုင် ထောင်ဒဏ်ချမှတ် ခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်ထုတ် The Voice Daily၊ စံတော်ချိန် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာနှင့် မြန်မာသံတော်ဆင့် သတင်းဂျာနယ်တို့တွင် သတင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ပြည်တွင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မြန်မာစာနယ်ဇင်း သမဂ္ဂနှင့် PEN Myanmar တို့က ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သော နိုင်ငံတကာ ဂျာနယ်လစ်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ(CPJ)၊ နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့ (RSF) နှင့်ကမ္ဘာ့သတင်းစာများနှင့် သတင်းစာ ထုတ်ဝေသူများ အစည်းအရုံး (WAN-IFRA) တို့ကလည်း အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်အပေါ် ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက်များကို မကြာမီ ထုတ်ပြန်သွားမည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာ ၆ - မလေးရှား ၀ (တတိယ)
တတိယနေရာ ရရှိတဲ့ မြန်မာ့အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ပွဲပြီးပါက ကျပ် သိန်း ၂၅၀၀ ဆုချမှာဖြစ်တယ် လို့ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်က ပွဲပြီးခါနီးမှာ ပြောပါတယ်။
The Modern News Journal.
မြန်မာ အမျိုး သမီး အသင်းရဲ့ ပဲ့ကိုင် play maker သန်းသန်းထွေး
ထိုင်ငိုမယ်ဆိုလည်း ငိုလောက်ပါတယ် တော်ချက်ကတော့
သန်းသန်းထွေးရဲ့ နာမည်ကြီး Kick ချက် လန်ထွက်
စစ်တပ်အထဲမှာရော အစိုးရအထဲမှာရော လွှတ်တော် အထဲမှာရော ဘယ်သူတွေဟာ သန်းရွှေဂိုဏ်းသားလဲဆိုတာ ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရမယ့် အချိန်ရောက်ပါပြီ
နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းအပြီးမှာ သန်းရွှေ ဂိုဏ်းသားတွေ စပြီးလှုပ်ရှားမယ်လို့ သတင်းရထားပါတယ် ၊
ခရစ်စမတ် နဲ့ နှစ်သစ်ကူးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ တွေကို အကြောင်းပြ ပြည်သူတွေကို အာရုံလွှဲထားပြီး လှုပ်ရှားကြမယ်တဲ့ ၊
ပြည်သူတွေ အာရုံထွေပြားနေတဲ့ အချိန်မှာ လက်ပံတောင်းတောင်ကို ဖြိုခွင်းကြမယ်တဲ့ ၊ ကိုနေမျိုးဇင်ကို ပိတ်ဆို့ထားမယ်တဲ့ ၊
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဒီအတိုင်းဆက်ထားရေး ဆန္စ္ဒပြပွဲ လမ်းလျှောက်ပွဲတွေ လုပ်မယ်တဲ့ ၊
ပြည်သူတွေက နိုးကြားလာလို့ တုန့်ပြန်လာရင် သူတို့ဖွဲ့ထားတဲ့ စွမ်းအားရှင်လို့ခေါ်တဲ့ အနုတ်စုတ်ဂုတ်စုတ် ရမ်းကားချင် တဲ့သူတွေကို ရောထည့်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တဲ့ ၊
၂၀၁၄ မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို အကြောက်တရားအောက်မှာ ပြားပြားဝပ်သွားစေမယ် တဲ့ ၊
သူတို့ အစီအစဉ်တွေကို ဖော်ထုတ်ဖွင့်ချနေတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုလည်း ပိုပြီး နှေးအောင်လုပ်ထားမယ်တဲ့ ၊
အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ ဆိုတာလည်း ပြန်ဖွဲပြီး ပြည်သူတွေကြားမှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် အရင်လို သူလျှို ဒလံတွေ ထည့်ပြီး နှောက်ယှက်အုံးမယ်တဲ့ ၊
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစားချုပ် မဖြစ်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ အကောက်ကြံအုံးမယ်တဲ့ ၊
စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူကို အမြဲတစေ ရန်စောင်နေအောင် လုပ်ထားမယ် တဲ့ ၊
လောလောဆယ်မှာ စစ်တပ်အထဲမှာ အစိုးရအထဲမှာ လွှတ်တော်အထဲမှာ သန်းရွှေ ဂိုဏ်းသားတွေ ဂျိုထောင်နေပါပြီ ၊
သန်းရွှေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကြီးအပေါ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထင်တိုင်းကြဲဖျက်ဆီး ကိုယ်ကျိုးရှာခဲ့သူပါ ၊
သန်းရွှေရဲ့ ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို တားဆီးရပါမယ် ၊
ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ သန်းရွှေဂိုဏ်းသားလား ၊
သမ္မတသိန်းစိန်ဟာ သန်းရွှေဂိုဏ်းသားလား ၊
ဥက္ကဌရေအမန်းဟာ သန်းရွှေဂိုဏ်းသားလား ၊
အောင်သောင်းဟာ သန်းရွှေဂိုဏ်းသားလား ၊
တင်အေးဟာ သန်းရွှေဂိုဏ်းသားလား ၊
မြင့်ဆွေဟာ သန်းရွှေဂိုဏ်းသားလား ၊
အောင်သိန်းလင်းဟာ သန်းရွှေဂိုဏ်းသားလား ၊
တေဇဟာ သန်းရွှေဂိုဏ်းသားလား ၊
ဇော်ဇော်ဟာ သန်းရွှေဂိုဏ်းသားလား ၊
သန်းရွှေဂိုဏ်းသားတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်သယောင်နဲ့ ကြာကြာဟန်မဆောင်နိုင်ပါဘူး ၊
အခုအချိန်ကစပြီး သန်းရွှေဂိုဏ်းသားတွေကို ဖော်ထုတ် အမြစ်လှန်ကြပါစို့ ၊
(နေပြည်တော် သတင်းရပ်ဝန်းမှ ပေးပို့လားသော သတင်းဖြစ်ပါသည်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့တဲ့ အသီးအပွင့်ရလာဒ်တွေ စတင်မြင်တွေ့နေရပြီ
၂၀၁၂ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့တဲ့ အသီးအပွင့်ရလာဒ်တွေကို အခု စတင်မြင်တွေ့နေရပြီဟု သံတမန် အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ပြောကြားမှုများထွက်ပေါ်
၂၀၁၂ တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့တဲ့ အသီးအပွင့်ရလာဒ်တွေကို အခု စတင်မြင်တွေ့နေရပြီဟု သံတမန် အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ပြောကြားမှုများထွက်ပေါ်နေပါတယ် ၊
၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၁ တုန်းက အခြေအနေတွေကို ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ ၊ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်တဲ့ အာဏာရ အစိုးရပါ ၊
လွှတ်တော်တွေကလည်း တရားဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လွှတ်တော်တွေပါ ၊
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ မြန်မာပြည်ကြီးဟာ အရပ်သားအစိုးရလက်ထဲကို အောင်မြင်စွာ အာဏာလွှဲအပ်နိုင်လိုက်ပြီလို့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ကြေညာနေတဲ့ အချိန်ပါ ၊
မြန်မာပြည်ကြီးကို တည်ဆောက်ဖို့ ရေခြားမြေခြားရောက်နေသူတွေ ပြန်လာကြပါ ၊ မတူတာတွေ ထားပြီး တူတာတွေ စုလုပ်ကြမယ်လို့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ကြွေးကြော်အော်ဟစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ၊
အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောင်ထဲမှာ အကျဉ်းကျခံနေရတုန်းပါ ၊
ပြီးတော့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး လွှတ်တော်အထဲဝင် မျက်နှာချင်းဆိုင် အဖြေရှာဖို့ နည်းလမ်းကို အသုံးပြုဖို့ ကမ္ဘာသိ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် ၊
အကျဉ်းကျခံရနေမှုမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် ၊
ပါတီကို ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်မယ် ၊ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်မယ်ဆို တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို အစဉ်တစိုက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူအချို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ယောက် ယူနီဖောင်းပြောင်းစစ်အစိုးရ ရဲ့ အသုံးချမှုကို ခံလိုက်ရပြီ လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တာတွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ် ၊
မြန်မာပြည်ကောင်းဖို့ အတွက် ကျမကို အသုံးချမယ်ဆိုရင် အသုံးချခံဖို့ ကျမ အဆင်သင့်ရှိပါတယ် ဆိုပြီးအသိပေးတုန့်ပြန်ခဲ့ပြီး သူမလုပ်ဆောင်စရာရှိတာတွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ၊
အဲဒီအချိန်ကစလို့ ၈၈ မျီုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာ သူမကို ဆက်လက်ထောက်ခံတယ်ဆိုတာ အရင်လောက် အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မရှိကြတော့ပါဘူး ၊
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူအများ တအံ့တသြဖြစ်ရအောင် သူမပါတီ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ် ၊
အဲဒီ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကနေ ဒီကနေ့ ၂၀၁၃ နှစ်ကုန်အထိ သူမ အပင်ပန်းခံ အလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ၊ ပြည်သူတွေကို မိန့်ခွန်းတွေ အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပါတယ် ၊ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်ပေါင်းများစွာ ထွက်ခဲ့ပါတယ် ၊ နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်တွေကမိန့်ခွန်းတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်လွှားက သူမကို ထောက်ခံနေကြတဲ့သူတွေကို ထိုက်တန်ကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ၊
သူမရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကြောင့် မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အပြောင်းအလဲ အတော်များများ ဖြစ်သွားပါတယ် ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ဆက်တိုက်လွှတ်ပေးတာ ၊ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေရရှိလာတာ ၊ စစ်တပ်နဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ က သူမကိုအမြင်မှန်တဲ့သူတွေရှိလာတာ ၊ အစိုးရဘတ်ဂျက်အထဲက လွဲနေတာတွေကို ပြုပြင်ထောက်ပြနိုင်ခဲ့တာ ၊ အစိုးရကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်မှုတွေရှိလာတာ စတာတွေဟာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ရလာဒ်တွေပါပဲ ၊
ရခိုင်အရေး မိတ္ထီလာအရေး စတဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ဆန်တဲ့ တမင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ထောင်ခြောက်တွေကို သူမ အောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ၊
ဒေသတွင်း သြဇာချဲ့လာတဲ့ တရုတ်ပြည်ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို တန်းတူဆက်ဆံဖို့ သူမက သမိုင်းဝင် သတိပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ် ၊
လက်ပံတောင်းတောင် အရေးမှာတော့ သူမရဲ့ ရေရှည်မျှော်ပြီးချမှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဒေသခံတွေရဲ့ သဘောမကျမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ် ၊ ဒါဟာ သူမအတွက် အောက်ခြေပြည်သူလူထုရဲ့ မျှော်မြင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း နိမ့်ကျနေဆဲဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကိုသတိပြုမိသွားစေပါတယ် ၊
ဆက်လက်ပြီး သူမရဲ့ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေတဲ့ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ အတွက် ဦးနှောက်ခြောက်စရာဖြစ်လာပါတယ် ၊
သူမရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကတဆင့် အခုဆိုရင် ဦးသန်းရွှေဟာ နောက်ကွယ်မှာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အစိုးရ နဲ့ စစ်တပ်ကို ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်ထားနိုင်ဆဲဖြစ်ကြောင်း ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအထဲက ဒီမိုကရေစီ မကျတာတွေကို ပြုပြင်ဖို့ ဦးသန်းရွှေက သဘောတူဖို့အလားအလာမရှိကြောင်း နဲ့ အချိန်ဆွဲ အာရုံပြောင်းနည်းကို ဦးသန်းရွှေက အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စီမံနေကြောင်း စတာတွေကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မိတ်ဆွေ နိုင်ငံတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား သိမြင်စေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ၊
တဆက်တည်းမှာပဲ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ မြောက်ကိုရိးယားနဲ့ ဆက်လက်ကူးလူးဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ တွေ့ရှိနေရလို့ မြန်မာစစ်တပ်အထဲက တာဝန်ရှိသူ အရာရှိတွေကို စတင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ် ၊
နျူကလီးယားလက်နက်ကို ဦးသန်းရွှေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ ရရှိဖို့လည်း နီးစပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ် ၊ ဦးသန်းရွှေ အာဏာရှိစဉ်က မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိမှုမှာ ဦးသန်းရွှေ ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းပါဝင်ပတ်သတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ၊
လက်ရှိ မြန်မာံနိုင်ငံက အစိုးရ လွှတ်တော် နဲ့ စစ်တပ် ပိုင်းက ထိပ်ပိုင်းနေရာယူထားတဲ့ သူတွေဟာ ကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အဆံ သိပ်ရှိကြပုံ မပေါ်ပါဘူး ၊ မတရားဖိနှိပ်မှုတွေ လူသားချင်း မစာနာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာက တုန့်ပြန်တာတွေကို ရေလည်အောင် သိရှိထားကြပုံမပေါက်သေးကြပါဘူး ၊
လာမယ့် ၂၀၁၄ မှာ ဦးသန်းရွှေ လက်ထက်က ပြစ်မှုတွေကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခုံရုံးတွေမှာ စတင်လက်ခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ၊ မကြာသေးခင်ကပဲ စပိန်တရားရုံးတစ်ခုက တရုတ်သမ္မတဟောင်း ကျန်ဇီမင်း နဲ့ သူရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဝန်ကြီးချုပ် လီပင်းတို့ကို တွေ့တဲ့နေရာမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး တရားရုံးမှာ အမှုလာရောက်ရင်ဆိုင်ဖို့ အမိန့်ချမှတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် ၊
ဦးသန်းရွှေ နဲ့ သူရဲ့ လူတစ်စုဟာ သူတို့ရဲ့ရက်စက်ယုတ်မာမှုတွေကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအထဲမှာ စာကြောင်းကလေးတွေ နဲ့ ကာကွယ်ထားရုံနဲ့ ရပြီလို့ ထင်ရင်မှားပါတယ် ၊ အဲလိုလုပ်ရပ်တွေကို တကမ္ဘာလုံးက လက်မခံကြပါဘူး ဆိုတာ မေ့နေပုံရပါတယ် ၊
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ စစ်တပ် လက်ရှိ အစိုးရ နဲ့ လက်ရှိလွှတ်တော်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ဆန္ဒ နဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို နောက်ပြန်ဆွဲထားမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုအားတွေကို ၂၀၁၄ အထဲမှာ တွေ့မြင်ရမယ်လို့ နီးစပ်တဲ့သူများ လက်တို့ပြောထားကြပါလို့ အကြံပြုပါတယ် ၊
(သံတမန်သတင်းရပ်ကွက်မှ ပေးပို့လာသော သတင်းဖြစ်သည်)
ကျားဖြူပါတီက ထုတ်တဲ့ ယူနတီ ဂျာနယ်
မက်စင်ဂျာ ဘယ်သူ့ကို ဒီတပါတ် အချွန်နဲ့ ပင့်မလဲ ၊
ကဲ မနက်ဖြန် ထွက်မယ်တဲ့
အဆင်း ဘီးတပ်မလဲ စောင့်ကြည့်နေရတယ် .... ငိ ငိငိ
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် တန်ခိုးအာဏာထွားနေတုံးက အစည်းအဝေးတခု ကို အမှတ်သွားရမိတယ်။ အဲ့ဒီတုံးက ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဘ၊ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည် နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင် တို့ အုပ်စုက တအုပ်စု၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေက အုပ်စုတစု၊ အားပြိုင်နေကြတာကိုး။
ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဘ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်တို့ အုပ်စုက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်နဲ့ အစည်းအဝေးမှာ " ဘယ်လိုလဲဗျ၊ အဲ့ဒီ မိန်းမကို အာဏာအပ်ရင်အပ်၊ မအပ်ရင်လည်း သတ်ပစ်လိုက်ဗျာ" စ်ိတ်မရှည်တဲ့ လေသံ နဲ့ ပြောသတဲ့။
ထုံးစံအတိုင်း ကိုခင်ညွှန့်က ကျားငစဉ်းလဲ အပြုံးနဲ့ ပြုံးတယ်။ သူလုပ်နေကျအတိုင်း ဘယ်လက် လက်ချောင်းလေးတွေကို ကုလားထိုင်လက်တန်းလေးကို တဒေါက်ဒေါက်ခေါက်ပြီး လူကြမ်းဝင်းညွှန့်လေသံ နဲ့ မခိုးမခန့်ပြောတယ်။ ” ဟာ -- နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဒီလို လုပ်လို့မရဘူးလေ။ ဒီလို အလုပ်တွေ ဆိုတာ ကျကျနန လုပ်ရတယ် " လို့ ဆိုတယ်။ ( စကားလုံးအတိအကျတော့ မသိပါ။ သူတို့ထဲက အတွင်းလူက ပြန်ပြောတာမို့)
မကြာပါဘူး။ လမ်းပြမြေပုံ (၇) ချက် ပေါ်ထွက်လာတော့တယ်။
ဦးခင်ညွှန့် ကို အင်တာဗျူးချင်တဲ့ သူတွေ ကို တခုထပ်မေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ လမ်းပြမြေပုံကို ဆွဲခဲ့တာ၊ ဦးခင်ညွှန့် လား၊ ဦးသန်းရွှေ လား ဦးသန်းရွှေကြီး ကို အခုလို လုပ်တတ်လာအောင် သင်ကြားညွှန်ပြပေးတဲ့သူက ဘယ်သူလဲ လို့။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် ကလဲ အနေမတတ်ရှာဘူး။ သတင်းစာမျက်နှာဖုံးတွေမှာ ဆိုရင် ကလေးနမ်းပြနေတဲ့ပုံတွေပြ( ကြင်နာတတ်ကြောင်းပြတာပေါ့) နေရာတကာမှာ ဥက္ကဋ္ဌ နေရာတက်ယူ၊ ၁၉၉၆ မှာ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ နဲ့ ကျောင်းသားသစ်တွေ ညနေစာတွေ့ဆုံပွဲတွေ ဘာတွေ လုပ်ပြီး၊ လူမြင်ကွင်းမှာ အရမ်းထွက်ပြတယ်။ ဒီ တနှစ်ပြီးရင် တက္ကသိုလ်နယ်မြေမှာ ၈၈ မျိုးဆက်တွေကို အပြီးသတ်ရှင်းနိုင်ပြီ ဆိုတော့ အရေးအခင်းတွေကို စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ( ၁၉၉၆ အထိ ၈၈ မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းပြန်တက်နေဆဲပါ)
၁၉၉၆ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုက ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ဝုန်းကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဦးခင်ညွှန့်တယောက် မျက်စိမျက်နှာပျက် နဲ့ ငိုတော့မဲ့အတိုင်းပဲ။
တကယ်တော့ ဦးခင်ညွှန့်ဆီက သင်ခန်းစာယူရမှာ တခုတော့ရှိတယ်ဗျ။ သူက နေရာတကာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်တယ်။ လောဘကြီးတယ်။ ဒါကြောင့်တဘက်အုပ်စုက အမြင်ကပ်ပြီး ရှင်းပစ်လိုက်တာ။
ကဲ-- အခုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း မေးနေပြီဗျာ။ ဒီ အခြေခံဥပဒေကြီးကို ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ သူတွေက အခုတော့ ငါနဲ့မဆိုင်သလို မလုပ်ကြပါနဲ့ တဲ့။
ကိုခင်ညွှန့်ရဲ့ အင်တာဗျူး (၂) ကြီးမှာ သမိုင်းရှင်းတမ်းလေးတွေ ဖတ်ချင်ပါရဲ့
( ဒီအကြောင်းတွေ ပြန်ပြောပြနေတာ နောင်လာမဲ့ ပို့စ်တွေအတွက် ကြိုခင်းထားတာပါ။ စစ်တပ်က ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အကြောင်းကို သိနေတယ်။ လုပ်ကြံပစ်လိုက်၊ အခြေခံဥပဒေ ကို သစ္စာလာဆိုစေရမယ် ဆိုတာ အခုမှ တွက်ချက်ခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ)
မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မလုပ်နိုင်ခြင်...
မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း မန္တလေးမြို့အတွင်း လှည...
ဂျာနယ်လစ်ကို ပါးရိုက်တဲ့ မင်းသမီးကြတော့ ဒဏ်ငွေ တစ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့တဲ့ ...